Abiyyi Ahimad - Wikipedia
Abiy Ahmed Ali (2019)
Dr Abiyyi Ahamad Ali nama siyaasaa yoo ta'u bara 2018 jalqabe muummee ministeera Itoophiyaa 4ffaa ta'uun tajaajila jira. Kana dura sadarkaa itti aanaa pirezidaantii Oromiyaatti ittigaafatamaa waajjira Jiddugalaa DhDUO ta'ee hojjata ture.
Seenaa Duuba[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Abiyyi Ahimad kan dhalate godina Jimmaa magaalaa Aggaarootti. Barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa achuma magaalaa Aggaaroo fi magaalaa Jimmaatti barate.
Abiyyi digrii isaa jalqabaa bara 2001tti Kompitar Injinariingidhaan Maayikirooliinki Informeeshin Teknooloojii Koollejji irraa fudhate. Bara 2005tti ammoo poostigiraajuweet adivaansiid dippiloomaa gosa barnootaa 'Cryptology' yookiin 'aartii barreeffama dhoksanii dabarsuu' Yuunivarsiitii biyya Afrikaa Kibbaatti argamu irraa argateera.
Digrii lammaffaa isaa 'Transformational Transformation and Change with Merit' yuunivarsitii Landanitti argamu Giriinwiichirraa bara 2011tti argateera. Kana malees, Yuunivarsitii Liidistaar Ashlaand irraa MBA bara 2013tti argateera. Akkasumas, bara 2017tti muummee qorannoowwan Nageenyaafi Tasgabbii (peace and security studies) barnoota isaa sadarkaa doktorummaa (PhD) Yuunivarsiitii Finfinneerraa argateera.
Dr Abiyi jalqaba bara 1980n keessa akka DhDUOtti makame kan himamu yoo ta'u, hirmaannaa siyaasaan alattis gama loltummaan sadarkaa leetanaal kolenelummaa qaba. Ergama dhaabbata biyyoota gamtoomanitin tasgabbii fi nageenya buusuuf gara biyya Ruwaandaatti duulee ture.
Bara 2000-2003tti ammoo Ejensii Nageenya Cimdaa Odeeffannoo (INSA) hundeessuun, sadarkaa daarektarumaatiin tajaajileera. Sana boodas Ministeera Saayinsii fi Teknoologii ta'uun hojateera.
Bara 2002 irraa kaasee miseensa koree jiddugaleessaa DhDUO ta'uun, bara 2007 irraa kaasee ammoo miseensa koree hojii raawwachiftuu ta'uun tajaajileera. Akkasumas waggoota sadan darbaniif miseensa koree hojii raawwachiftuu ADWUI ta'uun hojachaa jira. Dr Abiyi wayita ammaa kanatti itti gaafatamaa waajira Jiddugala DhDUO fi miseensa mana maree bakka bu'oota ummataati.
Abiyyi Badhaasa Noobelii Nagaa kan bara 2019 argate.
↑ Namoonni hedduun Ministira Muummee Itoophiyaa ni ta'a kan jedhan eeraa jiru, dhihootti kan baname: Guraandhala 22, 2018
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Abiyyi_Ahimad&oldid=33328" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 14 Fulbaana 2020, sa'aa 18:22 irratti.